Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး)
Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ကဘာလဲ။
Generic Name: Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
opedroxil (cephadroxil) ကိုအများအားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်သော ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားပိုးဝင်ရောဂါများ၊ လည်ချောင်းရောင်ခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်းတို့ကို ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။ ထိုဆေးသည် ဘက်တီးရီးယားများကိုသာ သေစေပြီး အအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို မသေစေပါ။
Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သောက်ဆေးများကို ဆေးဘူးပေါ်တွင် ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်းသောက်သင့်ပါသည်။
ဆေးကို ရေတဖန်ခွက်ဖြင့် မြိုချပါ။
ဆေးကို အစာနှင့်တွဲပြီး ဖြစ်စေ ၊အစာမရှိဘဲဖြစ်စေ သောက်နိုင်သော်လည်း အစာနှင့်တွဲသောက်ခြင်းက ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းများ မဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးပါလိမ့်မည်။
Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
opedroxil (cephadroxil) ကို အခန်းအပူချိန် မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ opedroxil (cephadroxil)ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ opedroxil (cephadroxil)ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
opedroxil (cephadroxil)ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
opedroxil (cephadroxil)ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Pivalone Neomycin ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလျှင်၊ ကလေးယူရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင်၊ ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်
ညွှန်ကြားချက်ရှိသော/ မရှိသော ဆေးများ၊ တိုင်းရင်းဆေးများနှင့် ဖြည့်စွက်အာဟာရများ မှီဝဲနေလျှင်
အခြားသော ဆေး၊ အစားအစာများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ဆေးသောက်နေရင်း ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အဆက်မပြတ်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းသွားလျှင် သွေးပါခြင်းများ ရှိပါက ဆရာဝန်အား ချက်ခြင်းဆက်သွယ်ပါ။
opedroxil (cephadroxil) ကို ဆေးပတ်လည်အောင် မသောက်ပါ က သင့်ရောဂါများကို အမြစ်ပြတ်အောင် ပျောက်ကင်းစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအခါ အခြားသော ကူးစက်ရောဂါပိုးများဝင်ရောက်ရန် ပိုလွယ်ကူလာပြီး နောင်တွင် ကုရခက်စေပါသည်။
opedroxil (cephadroxil)ကို ရေရှည်သုံးစွဲခြင်းကလည်း ဒုတိယအကြိမ် ပိုးဝင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာလျှင် ဆရာဝန်အားပြောပါ။ သင့်ဆေးများကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်လာနိုင်သည်။
ဆီးချိုသမားများတွင် ထိုဆေးကိုသောက်နေစဉ် ဆီးတွင်းသကြားဓါတ်များစစ်ပါက အဖြေမှန် မထွက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆီးချိုဆေးများကို မိမိဘာသာတိုးသောက်ခြင်း၊ လျှော့သောက်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။
ထိုဆေးသည် အချို့သော ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု ရလဒ်များကိုပါ မှားယွင်းစေနိုင်သည့်အတွက် ဆေးသောက်နေကြောင်းကို ဆရာဝန်နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းအား အသိပေးထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထိုဆေးကို အသက် ကြီးသူများတွင် သတိနှင့် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် ထိုဆေး၏ စိတ်ချရမှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိကျစွာဖော်ပြထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဆေးမသောက်မီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုးများခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသရမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း (အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း)
ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း
မိန်းမကိုယ်ယားခြင်း၊ အရည်များဆင်းခြင်း၊ အနံ့နံခြင်း
အရေပြားနှင့် မျက်လုံးများ ဝါလာခြင်း
ဖော်ပြပါ အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါက နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ ချက်ချင်းသွားပြရပါမည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
opedroxil (cephadroxil)ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
opedroxil (cephadroxil)က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
opedroxil (cephadroxil)ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
သွေးခဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မူမမှန်သော ရောဂါ
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ပြသနာများ
ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း (အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း) ပင်နီဆလင်အမျိုးအစားဆေးများ (ဥပမာ- amoxicillin) နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ဘီတာလက်တန် အနွယ်ဝင်ပိုးသတ်ဆေးများ (ဥပမာ- imipenem)နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိပါက ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးမရှိသော ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 1- 2g တနေ့တကြိမ် သို့မဟုတ် တနေ့ ၂ကြိမ်ခွဲသောက်နိုင်ပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးရှိသော ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 2g တနေ့ ၂ကြိမ်ခွဲသောက်ပါ။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 1g တနေ့တကြိမ် သို့မဟုတ် တနေ့ ၂ကြိမ်ခွဲသောက်နိုင်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 1g တနေ့တကြိမ် သို့မဟုတ် တနေ့ ၂ကြိမ်ခွဲသောက်နိုင်ပါသည်။ ၁၀ရက်သောက်ရ ပါမည်။
ကျောက်ကပ် မကောင်းခြင်း (CrCl50mL/min အောက်)
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 1g စသောက်ပါ။ ထို့နောက် 500 mg ကို ခြားခြားပြီးသောက်ပါ။
ရောဂါ သက်သာလာပြီးနောက်ပိုင်း ၃ရက်ဆက်သောက်ရ ပါမည်။
ကလေးတွေအတွက် Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြား ပိုးဝင်ရောဂါများ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ တနေ့လျှင် 30mg/kg ၁၂နာရီခြားပြီး ၂ကြိမ်ခွဲသောက်ပါ။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 30mg/kg တနေ့တကြိမ် သို့မဟုတ် တနေ့ ၂ကြိမ်ခွဲသောက်နိုင်ပါသည်။ ၁၀ရက်သောက်ရ ပါမည်။
လူကြီးများတွင် ပေးသော ပမာဏထက်လျှော့သောက်ပါ။ ရောဂါ သက်သာလာပြီးနောက်ပိုင်း ၃ရက်ဆက်သောက်ရ ပါမည်။
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ)
Opedroxil (အိုပယ်ထရော့စေး) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
opedroxil (cephadroxil)ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
opedroxil (cephadroxil) ဆေးရည် 250mg/5mL
opedroxil (cephadroxil)ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Cefadroxil Suspension Rx. http://www.empr.com/cefadroxil-suspension/drug/1750/. Accessed December 15, 2016
Cefadroxil. https://www.drugs.com/cdi/cefadroxil.html. Accessed December 15, 2016
Opedroxil. http://www.ndrugs.com/?s=opedroxil&t=pregnancy. Accessed December 15, 2016
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 12, 2018
Viral pharyngitis (ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်လည်ချောင်းရောင်ခြင်း)